पुरानो राशिको तपाईंको तुला राशि - सत्य वेद पुुस्तकहरू
लिब्रा, तुलाको नामले पनि चिनिन्छ, दोस्रो राशिचक्र हो र यसको अर्थ हो ‘ मापन गर्ने तराजु ‘। वैदिक ज्योतिष आज सम्बन्ध, स्वास्थ्य र धन मा सफलता को दिशामा निर्णय मार्गदर्शन गर्न तपाईंको कुंडली निर्माण गर्न तुला राशि को राशिचक्र प्रयोग गर्दछ।
तर के यो वास्तविक प्रयोग थियो?
तुला तारा फोटो। के तपाईले मापन गर्ने तराजुहरू देख्न सक्नुहुन्छ?
लिब्रा (तुला) ताराको तारामंडल हो जुन तराजु वा सन्तुलन बनाउँछ। यहाँ तुला ताराको चित्र छ। ताराहरूको यो फोटोमा तपाईं ‘ मापन गर्ने तराजु ‘ देख्न सक्नुहुन्छ?
रेखाहरूले जोडिएको ताराहरूका साथ तुला नक्षत्र
जब हामी ‘तुला’ को सितारा लाई लाइनहरु संग जोड्छौं, “तराजू” मात्र सम्भव व्याख्या छैन। तर मापन गर्ने तराजुको यो चिन्ह पछाडि फर्केर हेर्दा जहाँसम्म हामी मानव इतिहास मा थाहा छ त्यहाँ सम्म जान्छ ।
यहाँ इजिप्टको डेन्डेरा मन्दिरमा राशि चक्रको तस्विर देखाइएको छ, जुन २००० भन्दा पनि पुरानो हो,रातो घेरामा तुला राशि देखाइएको छ ।
तुला राशिको साथ डेन्डेरा राशि
यहाँ तल दिइएको नेशनल ज्योग्राफिक राशिफल तस्बिरले दक्षिणी गोलार्धमा देखिएको तुला राशि देखाउँदछ। त्रिकोण कुनै पनि मापन गर्ने तराजु जस्तो देखिदैन।
राशि नक्षत्रहरूको राष्ट्रीय भौगोलिक तस्विर। तुला रातोघेरामा छ
यसको मतलब यो मापन गर्ने तराजुको विचार पहिला आयो, तुला राशिको तारामा हेरेर होइन । त्यसोभए पहिलो ज्योतिषीहरूले यस विचारलाई ताराहरूमा अध्यारोपित गरे जुन तुलाको छवि सम्झन सहायताका लागि दोहोरिने चिह्नको रूपमा बनाउँदछ। प्राचीनहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई तुला राशिको औंल्याउन र मापन गर्ने तराजुसँग सम्बन्धित कथा भन्न सक्थे। यो यसको मूल ज्योतिषीय उद्देश्य थियो जुन हामीले यहाँ देख्यौं। तर सबैभन्दा पहिला मापन गर्ने तराजुको कसको विचार थियो?
हामीले देख्यौं कि सब भन्दा पुरानो पुस्तकहरूमध्ये एउटा अय्यूब थियो र उनले जोड दिए कि राशि चिन्हहरू परमेश्वरले बनाउनुभएको थियो:
प्रथम शताब्दीका इतिहासकार जोसेफसले भनेका थिए कि पहिलो मनुका प्रत्यक्ष बच्चाहरू, जसलाई बाइबलले आदम भन्छ, जसले राशि बनायो र कथा बनायो। उनीहरूले मापन गर्ने तराजुको विचार लिए र त्यो विचारलाई ताराको अवस्थित छवि ढाँचामा राखे। हामीले देख्यौं कि कन्याले कसरी कथा खोल्यो र अब यो लिब्रा (तुला) सँग जारी रहन्छ।
पुरातन राशिमा तुला कुंडली
तुला यो कथाको दोस्रो अध्याय हो र हाम्रो लागि रातको आकाशमा अर्को चिन्ह बनाउँदछ। यसमा हामी न्यायको चिन्ह देख्छौं। तुला राशिको यी आकाशीय तराजूहरूले हामीलाई धार्मिकता, न्याय, व्यवस्था, सरकार र ईश्वरको राज्यको शासन संस्थाका लागि चित्रण गर्छन्। तुलाले हामीलाई अनन्त न्यायको साथ आमने सामने ल्याउँदछ, हाम्रो पापको कर्म र छुटकाराको मूल्य।
दुर्भाग्यवस, फैसला हाम्रो लागि उपयुक्त छैन। आकाशीय सन्तुलनको माथिल्लो बाहु चम्किलो तारा समावेश गर्दछ – यसले देखाउँदछ कि हाम्रो असल कार्यहरूको सन्तुलन हल्का र अपर्याप्त छ। भजनसंग्रहले पनि त्यस्तै कुराहरू भन्दछ।
निम्‍न स्‍तरका मानिसहरू एक मुट्ठी सास मात्र हुन्‌, उच्‍च स्‍तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्‌। तराजूमा तिनीहरू जोखिँदा हलुका हुन्‍छन्‌, तिनीहरू दुवै एक मुट्ठी सास मात्र हुन्‌।
त्यसैले तुलाको ज्योतिष चिन्हले हामीलाई सम्झाउँछ कि हाम्रो कामको सन्तुलन अपर्याप्त छ। परमेश्वरको राज्यको न्यायमा, हामी सबैको राम्रो कामको एक सन्तुलन छ कि एक सास बराबरको वजन जाती मात्र पाइएको छ – कमी र अपर्याप्त।
तर यो निराशाजनक छैन । ऋण भुक्तान र दायित्वको मामलामा, एक मूल्य छ जो हाम्रो योग्यता को अभाव ढाक्न सक्छ। तर भुक्तान गर्न यो सजिलो मूल्य होईन। भजनसंग्रहले घोषणा गरे जस्तै:
जीवनको मोल बहुमूल्‍य हुन्‍छ, कुनै भुक्तानी कहिल्‍यै यथेष्‍ट हुँदैन।
तुला कुंडलीले हामीलाई देखाउँदछ कि हामी यो उद्धारकलाई कसरी चिन्न सक्छौं जसले हाम्रा दायित्वहरू तिर्न सक्छ।
प्राचीन तुला राशिफल कुंडली
कुण्डली ग्रीक “होरो” (घण्टा) बाट आएको हो र भविष्यसूचक लेखहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण घण्टाको रूपमा चिह्नित गर्दछ, त्यसैले हामी तुलालाई ‘घण्टा’ याद गर्न सक्छौं। तुला होरो अध्ययन यसरी गर्न सकिन्छ
४.तर समयको पूर्णतामा परमेश्‍वरले आफ्‍ना पुत्रलाई पठाउनुभयो। उहाँ एउटी स्‍त्रीबाट जन्‍मनुभयो, तथा व्‍यवस्‍थाको अधीनमा जन्‍मनुभयो।५. व्‍यवस्‍थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो, ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्‍त गर्न सकौं।
सुरुमा “तोकिएको समय आइसकेको थियो” भन्दै सुसमाचारको पुस्तकले हाम्रो लागि विशेष ‘होरो’ चिन्ह लागाउँछ। यो समय हाम्रो जन्मको समयमा आधारित छैन तर समयको सुरूमा एक घण्टा निर्धारण गरिएको छ। येशू ‘एक महिलाबाट जन्मिएको’ भनेर बताउँदा यसले कन्या र उनको बीजको कुण्डलीलाई संकेत गर्छ।
उहाँ कसरी आउनुभयो?
उहाँ ‘व्यवस्थाको अधीनमा’ आउनुभयो। त्यसैले उहाँ तुला राशिको तराजुमा आउनुभयो।
उहाँ किन आउनु भयो?
उहाँ हामीलाइ ‘ छुटकारा’ गर्न आउनुभयो जो ‘ व्यवस्थाको अधीनमा’ थिए – तुला राशिको तराजू। त्यसो भए उहाँले जसले हाम्रो कार्यहरू अती हलुङ्गो फेला पार्नु हुन्छ उनीहरूलाई उहाँले छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ । यो ‘ सन्तान अपनाउने’ को वचनको साथ अनुसरण गरिएको छ।
तपाईंको तुला अध्ययन
तपाईं र म आज तुला राशिफल अध्ययन निम्न कुराहरूमा लागू गर्न सक्दछौं।
तुलाले हामीलाई सम्झना गराउँछ कि तपाईको सम्पत्तीको पछि लागी सजिलै लोभमा पर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको सम्बन्धको खोजीले तपाईलाई अरुलाई निकम्मा जस्तो व्यवहार गर्ने बनाउन सक्छ र तपाई खुशी खोज्ने बित्तिकै मानिसहरुलाई कुल्चिन्छ। तुलाले हामीलाई भन्दछ कि त्यस्ता गुणहरू धार्मिकताको तराजुसँग उपयुक्त हुँदैनन्। अब जीवनमा तपाईले के गरिरहनु भएको छ त्यसको वृद्धि गराउनुहोस् । सावधान हुनुहोस् किनभने तुलाले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि परमेश्वरले हरेक कामलाई न्यायमा ल्याउनुहुनेछ, साथै सबै गोप्य चीजहरू समेत समावेश हुनेछन।
यदि त्यस दिनमा तपाईंको कामको सन्तुलन एकदमै हलुका छ भने तपाईंलाई एक उद्धारकर्ताको आवश्यक पर्दछ। तपाइँका सबै विकल्पहरू अहिले अन्वेषण गर्नुहोस् तर याद गर्नुहोस् कि कन्याको बीउ आयो ताकि उसले तपाईंलाई छुटकारा दिन सक्दछ। तपाईंको जीवनमा सही र गलत महसुस गर्न तपाईंको ईश्वर-प्रदान विशेषता प्रयोग गर्नुहोस्। तुला राशिफल अध्ययनमा ‘ग्रहण’ को अर्थ के हो भनेर यस विन्दुमा स्पष्ट नहुन सक्छ तर यदि तपाईले दैनिक सोध्नुभयो , ढकढक्याउनु भयो र खोजी गर्नु भयो भने उहाँले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। यो तपाईको हप्ता भरिको कुनै पनि दिन कुनै पनि समय गर्न सक्नुहुनेछ।
तुला र वृश्चिक
तुलाको तस्वीर मानव ईतिहासको शुरुदेखि नै परिवर्तन भएको छ। प्रारम्भिक ज्योतिषीय छविहरू र तुलाहरूको ताराहरूलाई दिइएको नामहरूमा हामी तुला राशिलाई समात्न वृश्चिकको पंजुरा देख्छौं । उदाहरण को लागी, चम्किलो तारा जुबेनेश्माली अरबी वाक्यांश अल जुबान अल समालियाय बाट आएको हो, जसको अर्थ हो “उत्तरी पंजा”। तुलाको दोस्रो सबैभन्दा चम्किलो तारा जुबेनेलगेनुबी अरबी वाक्यांश अल जुबान अल-जानबीयबाट आएको हो, जसको अर्थ हो “दक्षिणी पंजा”। वृश्चिकका दुई पंजे तुला राशिलाई समात्दैछन्। यसले एक ठूलो संघर्ष प्रकट गर्दछ जुन दुई विरोधीहरूको बिच चलिरहेको छ।
थप राशि कथा मार्फत र तुला राशिको गहिरो अध्ययन
यस संघर्ष कसरी देखिन्छ हामी वृश्चिकमा देख्छौं। यहाँको ज्योतिषा ज्योतिषको आधार सिक्नुहोस्। कन्याबाट कथा सुरु गर्नुहोस्।
तर तुलाको लिखित कथाको गहिराइमा जान:
कुम्भ मेलाले के प्रकट गर्छ
दस आज्ञा: हाम्रो कलियुग परीक्षा
भ्रष्ट … मध्य-पृथ्वीको ओर्क्सजस्तै
तुला कुंडली, तुला तारा चिन्ह, तुला राशि, तुला राशिफल, दैनिक राशिफल, पुरातन राशि, लाइब्रेरी कुंडली, लाइब्रेरी तुला